Hargaisa oo lagu qabtay shir looga hadlayo Abaaraha ka jira Soomaaliland (Sawiro) – Radio Daljir
Hargaisa oo lagu qabtay shir looga hadlayo Abaaraha ka jira Soomaaliland (Sawiro)
Maarso 26, 2019 11:29 b 0
Magaalada Hargaisa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo Abaaraha soo noq noday ee ka jira deegaanada Soomalailand. .
Shirkan ayaa waxaa goob-joog ka ahaayeen in ka badan 30 Hay’addood oo isugu jira kuwa Qaramada Midoobay, Hay’addaha Caalamiga ah iyo kuwa Samafalka ee dalka Soomaaliya ka howlgala fadhigoodana uu yahay magaalada Nayroobi.
Madaxweyne kuxigeenka maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo sheegay in biyo la,aan baahsan ay ka jirto deegaanada uu maamulka Soomalailand ka arimiyo.
Bartamihii bishan ayay ahayd markii shir kan lamid ah lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland, waxaana shir gudoominayay madxweyne kuxigeenka dowladda Puntland Axmed Karaash.
Alshabaab oo goob fagaare ah ku toogatay shan ruux